[Kanjani] Ukufaka iPlank kuDebian Wheezy | Kusuka kuLinux
[Kanjani] Ukufaka iPlank kuDebian Wheezy
Lokhu ukungena okufishane kepha bekubonakala kimi, kufanelekile ukuwabelana, ngoba nami lapho ngangisebenzisa Debian Bekufanele ngibe ngisungula ama-PPA ahlukahlukene ukuze ngikwazi ukufaka amaphakheji atholakala kuphela Ubuntu.
Kuwo wonke amaDokodo engizamile, engangikuthanda kakhulu kwaba Iplanki, eyenzelwe iphrojekthi I-ElementaryOS ukuqala kusuka I-Docky. Futhi njengoba wazi i-eOS kusekelwe ku- Ubuntu.
Yebo, uma sifuna ukufaka Iplanki en UDebian Wheezy, kufanele nje senze okulandelayo:
Sengeza kufayela /etc/apt/sources.list imigqa elandelayo:
## IPlank Debian Wheezy deb http://people.ubuntu.com/~ricotz/debian-plank wheezy main
Ngemuva kwalokho sibuyekeza futhi sifake iPlank
Futhi yilokho kuphela. Uma sifuna ukuyenza ngendlela oyifisayo, engeza izingqikithi nokuningi, nakhu onakho ukwenza kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » [Kanjani] Ukufaka iPlank kuDebian Wheezy
Ingabe into efanayo ingafakwa ngaphandle kokungeza amakhosombe angeziwe? Kukhompuyutha yami ephathekayo nginezinto eziyisisekelo futhi ngiyayithanda kakhulu, kepha ngiyafuna ukwazi futhi ngifuna ukugxumela ku-debian (okusho wonke umuntu ukuthi "kuhamba phambili" futhi kunamandla kakhulu). Ngingathanda futhi ukuthola indawo efana ne-pantheon (ehlanzekile nenhle), angiyithandi i-gnome ne-kde ne-xfce ayikholisi, futhi i-lxde ngiyibona nayo ingafani. Ngabe kukhona enye inketho noma ngabe isicelo sami siyinkimbinkimbi ku-debian futhi kuzofanele ngiguqule i-distro?
IGnome ifana kakhulu njengoba iPantheon isuselwa ku
Angazi noma ngabe kuDebian le Cinnamon nayo esuselwe ku-GNOME futhi, kuhle futhi
Ngisebenzisa i-XFCE futhi ngiyakwazi ukuyiguqula noma ngabe ngifuna kanjani, futhi ungayinika nokubukeka kwe-Pantheon, kumane nje kuyindaba yokwazi ukuyiguqula, ngokwesibonelo ufaka iSlingshot futhi usunayo isiqalisi sohlelo lokusebenza olufanayo, ufaka iPlank futhi unetheku futhi uguqula iphaneli ukuze likwazi ukubukeka okufanayo
into efanayo oyibonile ayikho amanye ama-repos; i-openbox + wbar ne-debian whezzy isilungele, i-xpad yama-stikers, okuthile okulula kunalokho: i-console jajja.
Ngabe lokhu kuzosebenza kuCrunchbang Waldorf ??? Noma ngabe i-Openbox kuzofanele iguqulwe kuqala ???
Imininingwane enentshisekelo kepha nginombuzo.Ngabe le ndlela izosebenzela nokuhlolwa kwe-Debian 8?
Yebo, leyo PPA inenguqulo ye-Wheezy neSid kuphela (ngicabanga).
Iplank yindawo yami engiyithandayo .. Ilula, iyashesha futhi isebenzisa izinsiza kusebenza ezimbalwa 😀
Futhi ngoDebian Jessie?
KuJessie kufanele ungeze umugqa olandelayo
i-deb http://people.ubuntu.com/~ricotz/debian-plank sid main
ama-debs awasayiniwe, kepha kusebenza kahle
elav akudingeki usebenzise ubuntu PPAs use cairo dock is the best dock I have tried if I could post a skrini and you would see how it is great, maybe you have already tried it but you have customized it to max? Uma ungazijabulisi ngokukuguqula njengokuthanda kwakho futhi ujabulele imiphumela, angikushintsheli kunoma yini.I-cairo dock isivele ibalulekile kunoma yikuphi ukufakwa.
Idokodo laseCairo lingcono futhi alincikile kubuntu
URodrigo Antoine kusho
Ngifuna ukufaka iPlank Ngifuna ukuyizama eCrunchbang Waldorf, angifuni idokodo le-cairo ngoba kusinda lapha ku-Openbox ukuba yi-minimalist distro kuzoba ukulandela lelo hlelo futhi sengivele ngilisebenzisa ku-KUbuntu nge-xfce angifuni ukushiya i-crunch ngokufanayo, akuwona umqondo, kepha uma ungeza ama-repos angiphonsa ngephutha lapho ngenza isibuyekezo, kungaba yini?
Phendula uRodrigo Antoine
Ukufakwa kwendawo yokuqhafaza nomshayeli wevidiyo ku-Arch Linux
I-SMTube: Isiphequluli esincane noma isiphequluli sevidiyo se-YouTube